Allegory yemuranda akasunungurwa - Afrikhepri Fondation
Chitatu, kubvumbi 14, 2021
Mufananidzo: Kubva mufirimu
Chirevo chemuranda akasunungurwa
LMusi waApril 27, 1848, chirevo chekumiswa kwehuranda chakasainwa. Chinyorwa ichi chinorambidza zviri pamutemo uranda. Asi, takasununguka zvechokwadi here?
Maketani asipo pamaoko edu achiripo mukusaziva kwedu nekuti simbi mumaketani edu yakatsiviwa neimwe keji inotonyanya kudzikisira. Kunyangwe miviri yedu yanga isisiri kurohwa, stigmata inoramba iri mundangariro dzedu. Ronda iri haripore nekuti rinotiyeuchidza nezvekurwadziwa kwekurova: kwekurangarira kwese kunyadziswa kwetsika. Nekuti, isu tichiri varanda vekurangarira kwedu uye zvakapfuura. Tisingazive, isu takagadzirirwa kudzokorora kutambura uku, sekunge kuti kubereka mutambo wakasarudzika, watakatamba natenzi wedu. Aya ndiwo maitiro munharaunda yedu yanhasi isu tisingazive tichida kufanana nemufananidzo watenzi.
Asi, uku handiko kukwirira kwekupenga?
Tinofanira here kuramba takasungwa ngetani patsoka nemawoko kuti tione kuti munhu mutema achiri muhuranda sei?
Mushure mekukutorera zvese zvekurangarira nhoroondo yedu, tsika nemagariro edu, takapihwa mvumo yekuenda kuchikoro kunodzidza nhoroondo yavo, tsika nemitauro yavo, asi hazvisi izvo here kavha nyowani?
Isu taive ivhu ravanoisa muforoma yavo uye zvino isu tiri mavhasi avanotengesa uye anoshongedza nharaunda yavo. Kupfuura kubva pachinzvimbo chemhuka kuenda kune icho chinhu, ndiwo mamiriro edu matsva emunhu. Hapana kudikanwa kwekupofumadza kune mapofu isu tiri.
Kudzora rakadzvanywa, ivo vanongoisa tomu pamusoro webhiza kuitira kuti mhuka yemusango ipingudzwe, nokudaro ichirasikirwa nesimba rayo, kushinga kwayo, rusununguko. Kubva pakubviswa kwevaranda, isu tave takasunungurwa-varanda asi kwete vanhu vakasununguka, nekuti hutapwa hwepanyama hwapa nzira kumuvengi akasimba uye ane utsinye. Uyu muvengi asingaonekwe anotonga mukuru mukusaziva kwedu uye anotonga hupenyu hwedu nechibhakera chesimbi. Iyi polycephalous chimera, chipingamupinyi chikuru kurusununguko rwedu, inonzi kunyepedzera, kusaziva uye kugadzirisa mamiriro. Kuti tikunde, isu tinofanirwa kutora kubva kunowanikwa nhoroondo yedu, uye nekuwana yakananga zivo. Aya ndiwo mararamire anozodzinga mhute yekusaziva uye tinozosununguka pakupedzisira.
Zvinodzidziswa zveTembere - Vol 2 (PDF)
Mashandisiro ekusaita negativity uye nekuzvisiya - Eckhart Tollé (Vhidhiyo)
Chii chinonzi Ki-Muntu?
Jesu muIjipita - Sarwat Al-Assiouty
Chinodiwa pakuvandudzwa kwevanhu (Audio)